मिडियामा झुटो सुचना फैलाउने एसएसपी लोहनीमाथि कारवाहीको तयारी , एआईजीले सोधे स्पष्टिकरण | My News Nepal
काठमाडौं। डिल्लीबजार कारागारबाट भागेका कैदी टिके भन्ने टीकाबहादुर थापा मगरमाथि प्रहरीले गोली प्रहार गरेको घटनाका सम्वन्धमा मिडियामा झुटो सुचना फैलाउने अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनीमाथि कारवाहीको तयारी भएको छ । गोली लागे लगत्तै टिके मारिएको भन्दै एसएसपी लोहनीले पत्रकारहरुलाई आँफै फोन गरी समाचार टिपाएका थिए । जसको आधारमा लोहनीको 'कोड' गरेर अधिकांश अनलाइनहरुमा समाचार प्रकाशित भएका थिए ।
तर, टिके नमारिएको र उनले भरतपुर अस्पतालबाट आफु ठिक रहेको भन्दै बोलेको भिडियो नै बाहिरिएपछि अनलाइनहरुले क्षमा माग्दै प्रहरीले नै झुटो समाचार दिएको भन्दै समाचार सच्चाएका थिए । गोली प्रहार जस्तो संबेदनशिल घटनाको बारेमा मिडियामा हचुवाको भरमा बोल्ने एसएसपी लोहनी माथि महानगरिय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले आईतवार स्पष्टिकरण सोधेको छ ।
अनुसन्धान गर्ने र घटनाको जिम्मेवारी लिने निकाय महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाटै उक्त गलत सूचना बाहिरिएको थियो।
लोहनीले अधिकांश सञ्चारमाध्यममा ‘प्रहरीको गोलीले टिके ढलेर मर्यो ’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए । महानगरीय प्रहरी प्रमुख एआईजी जयबहादुर चन्दले ‘टिके कहिले मर्‍यो भन्ने, कहिले घाइते भन्ने ? यस्तो सूचना कसरी लिक भयो ? भन्दै लोहनीसँग प्रस्टीकरण मागेका छन्। लोहनीले भने आफु कारवाहीबाट जोगिन गोली चलाएर मर्यो भनेर सुचना दिने प्रहरी जवानलाई कारवाही गरेर बलिको बोको बनाउन खोजेका छन्।
घाइते टिकेको अहिले ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै,टिकेका सहयोगी प्रहरीलाई फायर गरेर फरार भएको र सबैतिर खोज्ने काम भइरहेको एसएसपी लोहनीले वताएका थिए । तर,टिकेले भने आफुसँग कोही नरहेको दाबी गरेको भिडियोमा उल्लेख छ ।
घटनास्थलमा प्रहरीमाथि गोली प्रहार नभएको, त्यहा गोलीका कुनै पनि खोका नदेखिएको र टिकेका सहयोगी नै नरहेको खुलिसकेको छ ।
दर्जनौं चोरी तथा डकैतीमा संलग्न भएका उनी २ वर्षअघि सर्बेन्द्र खनाल महाशाखामा छंदा पक्राउ परेका थिए ।
रामेछापको दोराम्ब घर भएका टिके गत माघ ४ गते राती उनी डिल्लिबजारबाट भागेका थिए। टिके उनै व्यक्ती हुन, जो श्रृंखलाबद्ध रुपमा डकैती र चोरीमा कहलिंदै आएका थिए । उनले दुई बर्ष अघी एनआइसी बैंकबाट रकम निकालेर जाने क्रममा मन्दिरा अधिकारीको ६ लाख रुपैयाँ लुटेका थिए । पछिल्लो ३ वर्षको अन्तरमा उनले १५ पटक चोरी तथा डकैती गरेका थिए । २०६४ सालदेखि अहिलसम्म उनी ५ पटक जेल परेका छुटेका छन् । २०६४ साल भदौं १ गते डाँका मुद्दामा उनी पक्राउ परे । त्यसपछि छुटेर फेरि उनी २०६५ साल जेठ ५ गते चोरी मुद्दामा जेल गए ।
२०६८ साल असार २४ गते मोटरसाइकल चोरीमा जेल परेपछि ६८ साल फागुन ५ गते जेलबाट छुटेका थिए। उनी फेरि २०६९ साल साउज ३ गते चोरी मुद्दामा पक्राउ परे । जेलबाट छुटेर फेरि उनी २०७२ साल असार ७ गते चोरी तथा डाँका मुद्दामा फत्राउ परि २६ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।